Chikoro - Jiangsu Senwei Electronics Co, Ltd.
Yunivhesiti Dormitory Intelligent Simba Management System
kambasi imwe kadhi system & yekuzvishandira kubhadhara
Intelligent simba management system inosanganisira magetsi metering terminal, data yekuunganidza uye PC system software. Iyo magetsi metering kifaa iri yakajairwa energy mita kana modular simba metres ine RS485 interface. Iyo data yekuunganidza mudziyo ine mutoro wekuunganidza data yemamita data. Imwe neimwe yekuunganidza mudziyo inogona kutakura 128 emagetsi metres. Iyo data yekuunganidza mudziyo ine RS485, TCP / IP yakajairika network network. PC system software inoshandiswa kuunganidza data uye kuongororwa kwehuwandu hwe data.
Kune akawanda modhiyo emagetsi metering terminals: akajairwa masimba metres ane RS485 interface, ine yeiri Crystal kuratidza, mbiri-redunhu smart mamita, uye mana-wedunhu smart metres. Yakareba magetsi emagetsi metres ine yeiri crystal show module inogona kuratidza kushandiswa kwemagetsi kwakazara, simba rakashandiswa uye simba rakasara, rinonyanya kushandiswa pakuisirwa kuisa; modular metres inonyanya kushandiswa kune yakakura-yakagadzirirwa centralized yekuisa mode, yakasiya yepakutanga metering metinet kabhodhi zvikanganiso zveiyo yakaoma yemukati dhizaini, akawanda kukundikana mapoinzi uye kwakaomarara kuchengetedza.
Iyo mita inouya neCPU, iyo inoshanda zvakasununguka mabasa ese ekutonga masimba. Zviri nyore kuisa uye zviri nyore kuchengetedza. Chizvarwa chitsva chevadzidzi fafitera yemagetsi manejimendi ekutsiva iyo inotsiva yekutanga centralized control cabinet.
Kunze kwekuzadzisa yayo yekutarisira uye yekudzora mabasa, iyo yakangwara yemagetsi control system inogona zvakare kumanikidzwa necampus yekadhi kadhi kuburikidza neiyo interface yekuziva yekuzvishandira kubhadhara kwevadzidzi, chaiyo-nguva yekutarisa yekadhi kadhi, kuzadzisa isina kutarisirwa uye kushanda kwakachengeteka uye kwakagadzikana kwemagetsi control system. Chirongwa ichi ndechekudyidzana kwakanyanya uye kushandiswa kwemagetsi magetsi muzvikoro nemabhizinesi. Iyo RS485 yekutaurirana maitiro anoshandiswa mukati meimba chivakwa, uye TCP / IP inoshandiswa nzira iri kure yekukurukurirana pakati pezvivakwa.
(1) Mushandisi setup uye manejimendi manejimendi
-—Room marongero (nhamba yekamuri uye nzvimbo yenzvimbo senge pasi uye chivakwa, nhamba yevanogara uye inoenderana ruzivo ruzivo, mutero neruzivo rwakakosha)
——Meter terminal kumisikidzwa (tsamba pakati pezvino mita yemamiririri nenzvimbo yekamuri kurongedzwa, neruzivo rwevashandisi)
-— Data gedhi zvigadziriso (seta gedhi nhamba uye kamuri nemamita ruzivo pasi payo, nzvimbo yesuwo renzvimbo uye kudana, nezvimwewo)
(2) Magetsi kusangana uye kubhadharisa maneja
-—Seve kunze kwenyika kuyerwa chip (kuyerwa kwechiyero (1,0 mwero), uye kuburitsa akasiyana emagetsi ekushandisa paramita panguva imwechete)
——Magetsi akabhadharwa, hapana-muripo wekuvharira (kumashure kwechiyeuchidzo chekupererwa nemagetsi, muganho wekuwedzeredza unogona kuiswa nesoftware)
-Kuyeuchidza chiyeuchidzo pamberi (nhare yeSMS, chiyeuchidzo cheSOD, kambasi yeWEB mubvunzo)
——Rakakura marekodhi, kudhinda kwebhiri (kudhindisa deporesi kana uchiisa)
-Setepa rekutarisamishumo rezita (account dhata uye chiyero mushumo, cashier dhipoziti dhata)
-Self-service mubhadharo (kuti uwane isina simu dhizaini nekadhi imwechete yeji yekuzviripira pachako kubhadhara uye kutenga magetsi)
(3) Paramende Kugadziriswa uye Kutakura Mutoro
-I-software yacho inogona kuita akasiyana paramende magadzirirwo senge magetsi pane / kudzora kudzora, mutoro muganho, etc. uye kuburitsa uye nokuvachengeta kune mita mita terminal. Pasi pe-off-grid mashandiro, mita inogona kungoita mabasa akasiyana-siyana ekutarisira yakatarwa nesoftware
-Seta Simba-iro uye simba-kubva nguva chero nguva
——Magetsi emuganho wekuremerwa anogona kuisirwa pachisarudzo, uye zvinobva zvangodzima kana muganho wapfuura
-Masimba masimba ekuremera anogona kusevenzwa, kudzivirira moto
—— Ziva kushandiswa zvisiri pamutemo kwemaseke-ekudzivirira emagetsi zvigadziko kuburikidza nehunyanzvi nzira yekubvisa njodzi dzekuchengetedza
-—Automatic yekudzora basa mushure mekushaya simba, nguva yekudzora inogona kuiswa pamaminetsi 0-255, 0 inoreva kuti hapana kupora
(4) Kuongorora mamiriro uye kutonga kwedata
-—Equential chimiro chekutarisa (chaiyo-nguva yekutarisa mamiriro epamhepo uye chikanganiso chimiro chemamita, mamiriro epamhepo nemhosho yegedhi, nezvimwewo)
-—Room chimiro chekutarisa (chaiyo-nguva yekutarisa yekamuri ikozvino, magetsi, kuchengetedzwa kwemagetsi kushandiswa, nezvimwewo)
-—Status uye zvinyorwa (chaiyo-nguva yekutarisisa switch switch, simba ipapo, etc. kuti ubatirire zvinobudirira)
-Kuwana simba uye kushandiswa kwesimba (kubva pakuratidzira uye network WEB mubvunzo)
-Kutanga kwesimba remagetsi (kana ikapfuura, mutengo weyuniti uchabhadharwa)
——Fee kudzoserwa kwemari (vadzidzi vanozodzoserwa uye vagadziriswe panguva yekuendesa kana kupedza kudzidza, uye mushumo uchagadzirwa zvoga)
-—Room kuchinjanisa kushandurwa kwedata (semuenzaniso, kuchinjana kwemakamuri, kushandurwa kwedata kuburikidza nesetwork software)
-—Statistical ongororo yezvakaitika nhoroondo (pamwedzi, makota, uye gore negore kuongororwa kwekushandiswa kwemagetsi, kutyorwa, nezvimwewo)
——Various mutero unokwanisa kuiswa (mari dzakasiyana dzemitengo dzinoiswa maererano nehumwe hwakasiyana hwevanoshandisa mukamuri)
(5) YeSystem Management uye data Kuchengetedza
——Shutdown control kutadza alarm (control computer tarisa kuratidza chaiyo icons)
-Kuita chikanganiso chekuongorora chikurumidza kukurudzira (chengetedza tarisiro yekombuta kuratidza chaiyo icons)
Nezve anti-theft basa
——Kubva paB / S maivakwa (anogona kushanda, kutarisirwa, kudzvanywa, nezvimwewo kuburikidza neInternet)
-Kusabatana kusingabvumirane neye-kadhi kadhi system (kuziva kubhadhara uye kubhadhara, kuzvishandira-wega simba rekutenga)
-— Data kuchengetedzwa panguva ye simba simba kukundikana (kana simba simba kana kutadza komputa, metres uye muunganidzi otomatata anochengetedza dhata kuona kuti haizorasikirwe kwemakore gumi)
-—Remesa data backup (inoenderana neyakasiyana nzira dzekuchengetedza uye nzira dzekuti uve nechokwadi chekuchengetedzwa kwedata)
——Operator, password yemutangamiri, kupatsanurwa kwemasimba (mazita akasiyana ane masimba akasiyana, mapassword akasiyana, akachengeteka uye akavanzika, uye akarongeka akarongeka)
(1) Kuyerwa kwesimba rinoshanda uye rinoshanda.
(2) Izvo zvakakosha zvikamu zvinotora yepamusoro-mhando zvakakosha zvikamu.
(3) Kuratidzwa kweLCD ine kona yakakura yekuona uye yakakwirira musiyano inogona kuratidza: simba rakasara, simba rose rakazara, simba rakatengwa. zviri nyore kuti vadzidzi vatarise mashandisirwo emagetsi
(4) Nezvekuyera mabasa emagetsi, zvazvino, simba, simba chinhu uye zvichingodaro.
(5) Iyo mita pachayo ine data rekuchengetedza basa. Kana uchitaurirana nekomputa yekutarisira, iyo pakarepo inorongedza data yekuunganidza simba; inotsigira RS-485 kutaurirana protocol.
(6) Nekarenda uye wachi mabasa, mukati maawa masere, unogona chirongwa 8 nguva nguva kudzora simba kudzima
(7) Iyo mita yemagetsi inogona kushanda yakazvimirira uye iine basa rekuratidzira rekutakura zvakashata uye inopa vimbiso yakavimbika yekudzivirira njodzi dzekuchengetedza
(8) Adopt DIN Rail kuiswa, zvidiki uye nyore kuisa.
Revhisi vhorumu 222V
Ratidziro iripo 5（20）、10（40）A
Chikamu chechokwadi Active Level 1
Simba rekushandisa Voltage mutsetse: <= 1.5W, 10VA; mutsara wepano: <2VA
Kupisa huwandu -25 ~ 60degree
Mamita Constant (imp / kWh) 3200
Humidity range ≤85%
Wire Kubatanidza Mode Modes